Feeling – Maharmedianews
တစ်ချိန်က ငါတို့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြရင်
September 18, 2019 admin555
#ငါ့တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်တွေ့ ဖြစ်ခဲ့ရင် လည်ပင်းက နားကြပ်ကို ခဏဖြုတ်ထားခဲ့၊ ပခုံးပေါ်က အပွင့်တွေ ခဏဖြုတ်ထားခဲ့၊ ခေါင်းပေါ်က အင်ဂျီနီယာ ဦးထုပ်ကို ခဏချွတ်ထား၊ မင်းရဲ့Certificate တွေ ဘွဲ့ လက်မှတ်တွေ
“ငါ့ ၀မ်းပူဆာ မနေသာလို့” ဒီလိုလုပ်ရက်လေသလား
August 27, 2019 admin555
၀မ်းနည်းစရာ ဒီနေ့ ယုဇနအိမ်ရာဈေးထဲမှာ မိန်းမ၂ယောက် ဗျိုင်း၂ကောင် နဲ့ အသီးအရွက်တွေရောင်းနေတယ်။ ဗျိုင်းတွေက အသက်ရှင်သေးတယ်။တကောင်ကို ၃၅၀၀ ခုလေးတင် ဖမ်းတဲ့ကောင်လေး လာပို့သွားတာတဲ့။ ဗျိုင်းက ကြက်ထက်ပိန်ပြီးသေးတယ် စားလဲအရိုးပဲရမှာ။သူများယူမှာစိုးလို့ ဈေးမဆစ်ပဲ ချက်ချင်းဝယ် အိတ်နဲ့ထဲ့ ဟင်းစားလည်းမ၀ယ်နိုင်ပဲ
သခင်ဖြစ်သူက ကင်ဆာနဲ့သေဆုံးပြီးနောက်၊ (၁၅)မိနစ်အကြာမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ခွေးလေး
August 21, 2019 admin555
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို မွေးတဲ့အခါမှာ နောက်ပိုင်းစဉ်းစားလာရာမှာက သူတို့ရဲ့ သခင်ကိုချစ်လွန်းတဲ့ စိတ်ကိုပါ။ အမြဲတမ်း တွယ်တွယ်တာတာနဲ့ နောက်ဆုံးသခင်က ဆုံးတဲ့အခါမျိုးမှာ လိုက်ဆုံးသွားတာဟာ ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့် သခင်ကို သံယောဇဉ်တွယ်လွန်းနေတာကို မြင်သာစေပါတယ်။ နီရိုဆိုတဲ့ခွေးလေးနဲ့ ဟတ်ချီဆင်ဆိုတဲ့ သခင်နဲ့ ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ (၈)နှစ်ကျော်လောက်ကတည်းက
“သားကို အမေ လက်တင်ပီးတော့ အလေးပြုတယ် အမေမျက်ရည်ကျပေမဲ့ အမေပြုံးနေမှာပါ”တဲ့လား အန်တီ
August 19, 2019 admin555
အမေ လက်တင်ပီးတော့ အလေးပြုတယ် အမေမျက်ရည်ကျပေမဲ့အမေပြုံးနေမှာပါ”တဲ့လား အန်တီ နိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးလှူသွားတဲ့ သားကိုအမေဖြစ်သူက မျက်ရည်များနဲ့အတူဒီလိုလေး ဖြေသိမ့်သွားရှာတယ် အမေ့သားလေး ပျော်ပါစေငြိမ်းချမ်းပါစေ အေးချမ်းတဲ့ ဘုံဗိမာန်ရောက်ပါစေတဲ့ သားကိုစစ်တပ်ထဲထည့်လို့အမေ့ကိုလည်း အပြစ်မမြင်ပါနဲ့ သားရယ်တဲ့ သားအဖေကလည်းလေခြေထောက်တဖက်ပြတ်လည်း ပြုံးပြုံးပဲတဲ့သိလား ခြေထောက်တဖက်ပြတ်တာတောင်သေနတ်ကောက်ပီးတော့
ကျနော် သူ့အပေါ် သစ္စာရှိခဲ့ပါတယ်
July 18, 2019 admin555
” မောင်..ကျေးဇူးပြုပြီး မီးအပေါ်သစ္စာရှိပေးပါနော်… ” အဲဒီစကားကို သူ့ဆီကနေကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာကို တအံ့တသြနဲ့ ကြည့်ခဲ့မိတယ်။ တကယ်ဆို သူနဲ့ကျွန်တော်က အဲဒီစကားပြောရမယ့်သူတွေ မဟုတ်သလို၊ ကျွန်တော်သူ့ကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်လဲဆိုတာလဲ သူကောင်းကောင်း သိပြီးသား။ သူဟာ
ယာဉ်မတော်တဆမှုမှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဆရာဝန်လေး(၃)ဦးအကြောင်းကို “အမည် မဖော်တတ်သောဝေဒနာ” ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်လာသူ
June 12, 2019 admin555
အမည် မဖော်တတ်သောဝေဒနာ … ဒီနေ့ ဖျာပုံဆေးရုံက ဆရာဝန် ၃ယောက် ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့်သေတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ရင်း ရင်ထဲ တင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ခံစားမိရတယ် ။ ဆရာဝန်လောကဆိုတော့ ကိုယ့်ချင်းထဲက မပါပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းခဲ့ပေမယ့် မပြည့်ခဲ့ပါဘူး ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကျန်းမာရေးအဆင့် နောက်ဆုံးဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
May 26, 2019 admin555
ကျွန်တော့်ဇနီးဆုံးတာ ဒီနေ့တစ်လပြည့်ပါပြီ…. အရမ်းကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းခဲ့တဲ့ မိသားစုလေး အခုလို သေကွဲကွဲပြီး ပြိုကွဲရမယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးထား တဲ့အရာတစ်ခုပါ… လေးနှစ်အရွယ် သားလေးအတွက် နောက်ထပ်မွေးချင်းတစ်ယောက်လောက် ထပ်မွေးပေးချင်ခဲ့တာ ကျွန်တော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ဆန္ဒပါ။ အဲဒီဆန္ဒကပဲ ကျွန်တော်ဇနီးကို သေတွင်းထဲ
ကိုယ့်ကိုလှမ်းဆွဲတဲ့ လက်တစ်စုံကို ယုံကြည်မိတဲ့အခါ
May 25, 2019 admin555
မူရင်းဓာတ်ပုံ ပိုင်ရှင် Thiha tun ဆိုသူရိုက်ထားတဲ့ဒီပုံေ လးfb ပေါ်တက်လာတာတွေ့တော့ တွေ့တွေ့ချင်း လှောင်ပြီးဟားတိုက်ရယ်မိတယ် ….ဒီလောက်ရူးရသလားပေါ့ …. ပြီးမှကြည့်နေရင်းကြည့်နေရင်းနဲ့ မရယ်ရက်တော့ပဲ မျက်ရည်ဝိုင်းလာမိတယ်။ အဲ့ကောင်မလေးနေရာ မှာ ကိုယ့်ပုံရိပ်ကို ပြန်တွေ့လိုက်ရသလို ၊အဲ့ကောင်မလေးနေရာမှာ အမျိုးသမီးတော်တော်များများရဲ့ပုံရိပ်ကို
May 19, 2019 admin555
KNPPနဲ့ကရင်နီလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတစ်ချို့က ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကို ဖယ်ရှားဖို့အသဲအသန်တောင်းဆိုနေတာ တွေ့ရတယ် ၊အရမ်းအံ့သြ စက်ဆုပ်မိပါတယ် … ။ ကျူးဘားနိုင်ငံမှာ ကျူးဘားတော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသား ချေဂွေဗားရားရဲ့ရုပ်ထုရှိပါတယ် ။ကျူးဘားအစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေကတစ်လေးတစ်စားနဲ့ ဂုဏ်ပြုထားကြတယ် …ဘယ်သူကမှ ချေဂွေဗားရားရဲ့ရုပ်ထုကိုမကန့်ကွက်ကြပါဘူး … ။ အိန္ဒိယမှာမာသာထရီဇာရဲ့
“သေမယ့် အခြေအနေကြုံရမယ်လို့ ကြိုသိလိုက်ရတဲ့ ၂၅မိနစ်တာ အမှတ်တရ ….”
May 13, 2019 admin555
ဒီနေ့ မနက် ရန်ကုန်မှ မန္တလေး MNA UB103 ခရီးစဉ်.. Embraer 190 လေယာဉ်ရှေ့ဘီးမကျဘဲ အရေးပေါ် ဆင်းသက်ခဲ့မှု(Emergency Nosewheel-less Landing)ဖြစ်စဉ်မှာ ခရီးသည်အားလုံး.ဘေးမသီရန်မခဘဲ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကို သတ်မှတ်လေယာဉ်မောင်းနည်းနာများအတိုင်း ယုံကြည်မှု(Confidence )